ဒီနှစ် သင်္ကြန် ဘယ်မဏ္ဍပ် ထိုင်ရင်ကောင်းမလဲ ?? - CantWait2Say
Myanmar New April 6, 2018
ရန်ကုန်မှာ ဒီနှစ်အပီကဲမယ့်သူ တွေအတွက် Hot ဖြစ်နေတဲ့ မဏ္ဍပ်တွေ အကြောင်းကို ပြောချင်လွန်းလို့ စာဖတ်သူတွေကို ဖောက်သည်ချ လိုက်ပါတယ်။
● Thingyan Music Festival (TMF)
သုဝဏ္ဏဘူမိ Event Park မှာ ကျင်းပပြုလုပ်မယ့် TMF ဟာဆိုရင် DVBBS , Coone , Valentino Khan , Yellow Claw , Tujamo , TJR အစရှိတဲ့ International Dj player တွေသာမက Local Dj player တွေပါ ထပ်မံ အားဖြည့်ထားပါတယ်။ လက်မှတ်ဈေးနှုန်းတွေကတော့ GA ကို 80000 ကျပ်ဖြစ်ပြီး VIP ကိုတော့ 200,000 ကျပ်ဖြစ်ပါတယ် ။ Detail Information
ကတော့ 09450003558 ဖြစ်ပါတယ်။
The One Entertainment Park မှာ ပြုလုပ်မယ့် WetNation ကတော့ Dj Don Diablo , Laidback Luke , Kill the Noise , KURA , Garmiani , Henery Fong , Tom & James , MARNIK , Mari Ferrari အစရှိတဲ့ International Dj player တွေအပြင် အခြား Dj player တွေကပါ အားဖြည့်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။
လက်မှတ်ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ GA ကို 70000 ကျပ်ဖြစ်ပြီး VIP ကတော့ 175,000 ကျပ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းနံပါတ်ကတော့ 09451010789 နဲ့ 09965010789 ဖြစ်ပါတယ်။
● Road To Water Zonic Myanmar
International Dj Players တွေ အနေနဲ့ Headhunterz , Wolfpack နဲ့ အခြား Dj player တွေပါ ပါဝငဖျော်ဖြေကြမှာဖြစ်ပါတယ်။လောလောဆယ် GA ကို 60000 ကျပ် ဆိုပြီး ဈေးနှုန်းထွက်ရှိထားပါတယ်။ အသေးစိတိကိုတော့ water zonic ရဲ့ fb page ကနေ ကြော်ငြာပေးသွားမှာပါ။ နေရာကတော့ Myanmar Convention Center ( MCC ) မှာ ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
● EXODUS Myanmar Water Festival
အရင် Local Dj players တွေ နဲ့ ပြန်လက်တွဲပြီး အကောင်းဆုံး မဏ္ဍပ်အပြင်အဆင်တွေ နဲ့ ပွဲထွက်လာမှာပါ။ Lucky draw , Freeflow punch , shower System , CCTV တွေအပြင် လုံခြုံရေးပိုင်းကိုပါ သေချာ ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။
လက်မှတ်ကိုတော့ 50000 ကျပ်ကနေ စတင်ရောင်းချမှာပါ ။ အသေးစိတ်သိချင်ရင်တော့ 09767374716 , 09972437242 , 095163385 တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နေရာကတော့ ပြည်လမ်းမပေါ်မှာ ပါ။
● GOTHAM Water Festival
UV Rays ကို 99% ကာကွယ်ပေးမယ့် မဏ္ဍပ်အပြင်အဆင်တွေ အပြင် Shower System , Fascinating dance floor with disco Light နဲ့ full power Sound system တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ လက်မှတ်က 70,000 နဲ့ စတင်ရောင်းချမှာပါ ။ အသေးစိတ်သိလိုရင်တော့ 09785182471 ကို ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။ နေရာကတော့ ပြည်လမ်းမပေါ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
● BARRACK Water Festival
International Dj players တွေပါဝင်မယ့်အပြင် full shower system , cake party , free flow of punch , lucky draw , medical Booth နဲ့ special Sercurity Guard တွေပါ ပါဝင်ပါတယ်။ လက်မှတ်ကတော့ 60,000 ကျပ်နဲ့ ရောင်းချနေပါတယ်။ ဖုန်းနံပါတ် 095069595 နဲ့ 09977774141 ကိုလည်း ဆက်သွယ် ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ် ။နေရာကတော့ ကန်တော်ကြီး မျှော်စင်ကျွန်း မှာပါ ။
ဒီလောက်ဆိုရင် ဘယ်မဏ္ဍပ်က ကိုယ်နဲ့ အကိုက်ညီဆုံးလဲ ?? အလိုက်ဖက်ဆုံးလဲ ဆိုတာ စဉ်စားလို့ရလောက်ပြီ ထင်တယ် ။
Photo အားလုံး #Crd ပါ။
#pMk (Can’t Wait To Say)
ရနျကုနျမှာ ဒီနှဈအပီကဲမယျ့သူ တှအေတှကျ Hot ဖွဈနတေဲ့ မဏ်ဍပျတှေ အကွောငျးကို ပွောခငျြလှနျးလို့ စာဖတျသူတှကေို ဖောကျသညျခြ လိုကျပါတယျ။
သုဝဏ်ဏဘူမိ Event Park မှာ ကငျြးပပွုလုပျမယျ့ TMF ဟာဆိုရငျ DVBBS , Coone , Valentino Khan , Yellow Claw , Tujamo , TJR အစရှိတဲ့ International Dj player တှသောမက Local Dj player တှပေါ ထပျမံ အားဖွညျ့ထားပါတယျ။ လကျမှတျဈေးနှုနျးတှကေတော့ GA ကို 80000 ကပျြဖွဈပွီး VIP ကိုတော့ 200,000 ကပျြဖွဈပါတယျ ။ Detail Information
ကတော့ 09450003558 ဖွဈပါတယျ။
The One Entertainment Park မှာ ပွုလုပျမယျ့ WetNation ကတော့ Dj Don Diablo , Laidback Luke , Kill the Noise , KURA , Garmiani , Henery Fong , Tom & James , MARNIK , Mari Ferrari အစရှိတဲ့ International Dj player တှအေပွငျ အခွား Dj player တှကေပါ အားဖွညျ့ပေးဖို့ရှိပါတယျ။
လကျမှတျဈေးနှုနျးအနနေဲ့ GA ကို 70000 ကပျြဖွဈပွီး VIP ကတော့ 175,000 ကပျြ ဖွဈပါတယျ။ ဖုနျးနံပါတျကတော့ 09451010789 နဲ့ 09965010789 ဖွဈပါတယျ။
International Dj Players တှေ အနနေဲ့ Headhunterz , Wolfpack နဲ့ အခွား Dj player တှပေါ ပါဝငဖြျောဖွကွေမှာဖွဈပါတယျ။လောလောဆယျ GA ကို 60000 ကပျြ ဆိုပွီး ဈေးနှုနျးထှကျရှိထားပါတယျ။ အသေးစိတိကိုတော့ water zonic ရဲ့ fb page ကနေ ကွျောငွာပေးသှားမှာပါ။ နရောကတော့ Myanmar Convention Center ( MCC ) မှာ ပွုလုပျမှာဖွဈပါတယျ။
အရငျ Local Dj players တှေ နဲ့ ပွနျလကျတှဲပွီး အကောငျးဆုံး မဏ်ဍပျအပွငျအဆငျတှေ နဲ့ ပှဲထှကျလာမှာပါ။ Lucky draw , Freeflow punch , shower System , CCTV တှအေပွငျ လုံခွုံရေးပိုငျးကိုပါ သခြော ပွငျဆငျထားပါတယျ။
လကျမှတျကိုတော့ 50000 ကပျြကနေ စတငျရောငျးခမြှာပါ ။ အသေးစိတျသိခငျြရငျတော့ 09767374716 , 09972437242 , 095163385 တို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။ နရောကတော့ ပွညျလမျးမပျေါမှာ ပါ။
UV Rays ကို 99% ကာကှယျပေးမယျ့ မဏ်ဍပျအပွငျအဆငျတှေ အပွငျ Shower System , Fascinating dance floor with disco Light နဲ့ full power Sound system တှေ ပါဝငျပါတယျ။ လကျမှတျက 70,000 နဲ့ စတငျရောငျးခမြှာပါ ။ အသေးစိတျသိလိုရငျတော့ 09785182471 ကို ဆကျသှယျစုံစမျးနိုငျပါတယျ။ နရောကတော့ ပွညျလမျးမပျေါမှာ ဖွဈပါတယျ။
International Dj players တှပေါဝငျမယျ့အပွငျ full shower system , cake party , free flow of punch , lucky draw , medical Booth နဲ့ special Sercurity Guard တှပေါ ပါဝငျပါတယျ။ လကျမှတျကတော့ 60,000 ကပျြနဲ့ ရောငျးခနြပေါတယျ။ ဖုနျးနံပါတျ 095069595 နဲ့ 09977774141 ကိုလညျး ဆကျသှယျ ဝယျယူနိုငျပါတယျ ။နရောကတော့ ကနျတျောကွီး မြှျောစငျကြှနျး မှာပါ ။
ဒီလောကျဆိုရငျ ဘယျမဏ်ဍပျက ကိုယျနဲ့ အကိုကျညီဆုံးလဲ ?? အလိုကျဖကျဆုံးလဲ ဆိုတာ စဉျစားလို့ရလောကျပွီ ထငျတယျ ။
Photo အားလုံး #Crd ပါ။
ငယ်သေးတဲ့ အချစ်မလို့ မလေးစားတာလားပြောပါ
တူ… တူ အဆက်​မပြတ်​​ ခေါ်​နေတဲ့ ဖုန်းကြောင့်​ သူမ အိပ်​ချင်​ မူးတူး​ ကောက် ကိုင်​လိုက်​တယ်​ ဘယ်​သူလဲ ဟို.. မမ တားပါ ဘယ်​က တားလဲ တား နာမည်​က ဟိန်း​တေဇဘာ မမ မပီကလာ ပီကလာနဲ့ လာ​နောက် နေတာလား လုပ်​ရဲပါဝူး​ …
မြန်မာသမ္မတအပြောင်းအလဲကို မနှစ်ထဲက ကွက်တိဟောခဲ့တဲ့ နက္ခတ်ပညာရှင်
ရိုးရာ ဗေဒင်နက္ခတ်ပညာဟာ အတုအယောင် ဟောကြားသူတွေ များပြားပေမယ့် အစစ်အမှန် ပညာရှင်တွေကတော့ အရေးအကြောင်းဆို အားကိုးရလောက်အောင် မှန်ကန်တတ်ကြပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ သမ္မတ အပြောင်းအလဲကို မနှစ်ကတည်းက ကွက်တိဟောခဲ့တဲ့သူ အကြောင်းကို ပြောချင်လွန်းလို့ ပရိသတ်တွေအတွက် ပြောပြပေးသွားမှာပါ။ နာမည်ကျော် နက္ခတ်သိပ္ပံပညာရှင် ဦးဇေယျာကို ဟာ ၂၀၁၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့မှာ …
မြန်မာစစ်တပ်က တပ်ရင်း ၇၀ ကျော် ပါဝင်တဲ့ တပ်မကြီး ၂ ခု ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာ ရွှေ့ပြောင်း တပ်ဖြန့်ထား
မြန်မာစစ်တပ်က တပ်ရင်း ၇၀ ကျော် ပါဝင်တဲ့ တပ်မကြီး ၂ ခု ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာ ရွှေ့ပြောင်း တပ်ဖြန့်ထား “ကြွေတစ်လက် ကြက်တစ်ခုန်”October 13, 2017မြန်မာစစ်တပ်က တပ်ရင်း ၇၀ ကျော် ပါဝင်တဲ့ တပ်မကြီး ၂ ခု ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာ ရွှေ့ပြောင်း တပ်ဖြန့်ထားတယ်လို့ …